Mugwagwa Wekushambadzira Kwazvino | Martech Zone
Mugwagwa weKushambadzira Kwazvino
Chipiri, Mbudzi 6, 2012 Douglas Karr
Ini ndinoda kushambadzira uye zvese zvinomiririra. Mune maonero angu, kushambadzira kwakakosha nekuti kunounza pamwechete matarenda uye zvinhu:
Hunhu hwevanhu - kufanotaura hunhu hwevanhu uye kunzwisisa zvavanoda uye zvavanoda izvo zvinofambisa hunhu ihwohwo.
okugadzira zvinhu - kuuya nemazano matsva ari nyore uye akanaka, achigadzirisa kukoshesa kwevanhu kweaesthetics.
ongororo - kuongorora matombo e data kuti uwane mikana yekuvandudza uye kuwedzera mhinduro.
Technology - kushandisa matekinoroji kuyera, kugadzirisa uye kugadzirisa kushambadzira.
Tiri kusvika paGolden Age yekushambadzira uko hunyanzvi nesainzi vari kuwana iyo yakakwana equilibrium. Iko kugona kuyera kunosangana pamwe nekwanisi yekuongorora izvo zvinorehwa nemetriki. Uye iyo data haisi chete yekutyaira zvirinani sarudzo, asi zvakare inosunungura vashambadzi kuti vatonyanya kushinga, kuyedza, kuongorora kumucheto kwenzvimbo dzinozivikanwa dzinozivikanwa uye kupinda mune zvachose nyowani. Kubva kuEloqua's Infographic, Mugwagwa weKushambadzira Kwazvino
Takasvika sei pano?
Tags: nguvanhoroondoMarketingnhoroondo yekushambadzirakushambadzira kwemazuva ano
Kuwedzera kweChipiri Screen